Yahlula ukutya kwakho ngemifanekiso | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 8, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Umhlobo kunye nomlingane wam, uPat Coyle, udlulise ukuncoma kum ngebhlog yam. Uthe enye yezinto aziqaphelayo kukuba ndihlala ndithatha ixesha lokubeka imifanekiso kunye nomxholo. Kuyinyani-into endiyenzayo ngongeno ngalunye. Nantsi indlela yam ekhawulezayo nelula:
Ukuba andinawo umfanekiso okanye ividiyo ngesihloko, ndikhangela iqhekeza lobugcisa bokumela ubugcisa kwiMicrosoft's Clipart indawo. Ndikhangela ndisebenzisa iFirefox ukuze ndikwazi ukugcina i-gif yomfanekiso kwidesktop yam ukuze ndiyilayishe ngokulula. Usebenzisa IE kukwenza udlule kwinkqubo yobugcisa yeClip kunye neOfisi… iluncedo kuphela ukuba unqwenela ukuhlela okanye ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona bomfanekiso.
Ukuba ndinomfanekiso, ndihlala ndiwuzisa kwi-Illustrator kwaye ndizama ukuwulinganisa ukuze ulingane kwindawo endinayo. Andiyithandi imifanekiso emincinci kakhulu kwaye ithatha indawo ethe nkqo… Ndihlala ndisebenzisa align = left or align = right ukuyibeka kwicala lokungena ukuze ingangeni kwindlela yokufunda ungeno , kodwa isongeza umbala kuyo.
Nasi esinye isizathu sokuba ndongeze ikliphu: RSS. Xa abantu bebhaliselwe ukutya kwam, ndifuna ukwahlula kuluhlu lwemihla yokutya okubhaliweyo abakufumana yonke imihla. Ndizifumana ndikroba iintloko kunye nomxholo… kodwa ndihlala ndingathathi mifanekiso ndiyibonayo kwifidi.
Nantsi isampulu… yeyiphi eheha ukuqaphela?
Yahlula ukutya kwakho! Sebenzisa imifanekiso! Andikwazi ukufumanisa ukuba ingaba oku kukhokelela kukwanda kokufunda okanye ukugcinwa… kodwa inyani yokuba uPat uyiqaphele indenza ndizive ngathi inokuba njalo.
UMosh weePlums zeShukela
Okt 12, 2006 ngexesha 3:07 AM
Yinyani leyo. Logama igcinwe ubuncinci- ndiyayithanda i-RSS kuba iyaluthanda ucofo lwam 😉